Tinorwira kodzero dzevanhu! ne ∴ www.PixelHELPER.org
Kana iwe ukambove nedambudziko uye usingazive zvekuita zvinotevera, saka tsvaga iyo PixelHELPER
Holocaust Memorial Marrakech yevakakanganwa LGBT vakabatwa nehudzvinyiriri hweNazi muMorocco. Yakaparadzwa nehurumende inorwisa LGBT yeMorocco.
Pixel Munyaradzi anotarisa pasi rose Mumiriri & network network yekodzero dzevanhu against Kudzvinyirira uye nerusununguko rwekutaura kurwa. Nounyanzvi isu tinoda kudaro zvinokosha zvehupfumi ratidza. Isu tinoshandawo Development mapurojekiti eAfrica. Own Yakatemerwa chingwa makeke gadzira kuwedzera Kugadzikana kwechikafu nokuti Musasa wevapoteri, Makakatanwa matunhu & njodzi dzinongoitika dzoga chingwa chakasimba mumakangi. Tiri kuwedzera iwo Kugadzikana kwechikafu muAfrica. Munharaunda Emergency emergency PixelHELPER ari kuyedza padyo nemafekiniki echingwa chakaomeswa muAfrica ari padyo UNHCR misasa yevapoteri kuvhura zvipatara zvidiki zve mobile mobile. Ndokumbirawo tibatsireiwo pa Ipa menyu chinhu uye kutsigira basa resangano redu.
Angela Merkel anopa Julian Assange hupoteri hwezvematongerwo enyika. Vhidhiyo art katuni
ari Pixel Munyaradzi kurwisana nenetiweki yepasirese yevanoratidzira uye maartist nzira isina kujairika pamusoro mararamiro evanhu. Iwo maartist anotora chikamu anowanzoshandisa tekinoroji yazvino uye zvese zvishandiso zvekunyomba kuisa matambudziko mukutarisa kwekuburitsa midhiya.
Muvambi wePixelHELPER ndiye muimbi wechiedza Oliver Bienkowski anobva kuGerman. Mamwe maChiedza & maartist maartist uye mazhinji makatuni akapararira pasi rese uye vanoshanda pamwechete kuPixelHELPER yenyika iri nani.
Vangani vevasikana vedu takafirwa mukati Diamond migodi ku Bielefeld, kuitira kuti Kunoona muSierra Leone unogona kuimba "Madhayamondi ndiwo vasikana shamwari yepamwoyo ”, Iye zvino vava kuuyawo kuMediterranean uye vachiri kuda kurarama mumatambudziko edu.
Robin Washington Munhu wose anoziva. The infamous gororo Held inotora zvakanyanya vorongerwaavo vane mabasa angangodaro varipo wakakurumbira ichave iri kupfuura yepakutanga. With Pixel Mubatsiri International kukakavara pamusoro 70 international artists for one nyika yakanaka, tora kubva kune vapfumi muEurope uye upe kuvarombo pasi rese. Isu tiri. Neboka rake akatendeka ine PixelHELPER senhengo ye kodzero imba yake huru Africa kuwanikwa. Kwemakore tinorwisana Shamwari & mudziviriri wevarombo uye semhiko muvengi avo avo Simba & upfumi zuri Kudzvinyirira kudzvinyirirwa.
"Iyo PixelHELPER inowedzera yavo yechimurenga yekuvakisa block kune art & satire nebasa ravo"
"PixelHELPER ndeimwe yeanonyanya kugadzira incubators ezvematongerwo enyika chiito art uye anomirira chimiro chakawedzerwa cheunyanzvi," vamwe vanodaro. Isu tinoti: Unyanzvi hunofanira kukonzera kurwadziwa, kumutsa & kupanduka. Isu tine hanya neunyanzvi sechimiro chemagariro-kuzvisimbisa mumweya weChiedza. Mishandirapamwe yedu inoratidza mikana yeunyanzvi sesimba rechishanu mudunhu. Art saka harisi girazi raunobatirira pachokwadi, asi sando yaunogadzira nayo.
Kugadzirisa Cube yaRubik muvhidhiyo "Around the World mumazuva makumi masere" inomiririra cheni yehama dzevanhu dzakatenderedza pasirese, iyo PixelHELPER inoumba ingangoita neyayo livestream crowdfunding app muGoogle Playstore uye inokoka muoni kuti apindire.
Humanism sechiitiko chinofambidzana murukova rarama. Chengetedza kugovera kuburikidza nemaemaikisi muFacebook. Zombies haina dzinza, ruvara, kana chitendero; uropi chete! Iyo projekiti "Zombies isina Border" inozviona seyanopindirana rubatsiro swarm chikuva. Iro zita rinotorwa kubva kune akawanda zombie makomputa ayo anodzorwa kunze. Chinangwa chedu hachisi chinhu chakapfuura senzira yekugadzirisa njodzi dzese dzevanhu kuburikidza nerubatsiro kubva kune vanoona kuburikidza nerwizi rwuripo. Chinangwa chedu: 24 awa livestream kubva kunzvimbo dzinopisa dzenyika. Inoperekedza vatori venhau munzvimbo dzehondo, vachigovera rubatsiro mumisasa yevapoteri kana vanovhima vabati mhuka muKruger National Park. Mikana yekudzora kwedu kwakawanda haina muganho.Turu yedu
Nehunyanzvi zvinoshanda seizvi kuti isu tinotanga rukova rwuno rarama pamwe neyakajeka kutonga zvinhu uye tobva takoka avo vanoita "maZombies asina miganhu" vashandi kune yedu yekurarama rwizi. Nenzira iyi, isu tinoramba tichitarisa tarisiro yezvinhu zvekudyidzana zvekudzivirira zvinhu uye nekukurumidza kuita shanduko murukova rwizi panzvimbo yedambudziko.
Muna 2015 vatengesi vemaoko vatsva vaDr. Oetker Boka rakazozivikanwa munyika yese kuburikidza nemwenje majekesi kuFederal Ministry of Defense husiku hwese.
Nguva yechando yave kusvika & vanhu vasina pekugara vanoda rubatsiro rwedu Mhinduro yedu: Iyo PixelHELPER inotonhora emergency emergency capsule yekudzivirira vanhu kubva kutonhora kusvika pakufa mumigwagwa yeGerman. Gore rega rega vashoma maGerman vanofa nenjodzi dzendege pane vanhu vasina pekugara vanotonhora kusvika pakufa. MuGerman mune vanopfuura hafu yemiriyoni vasina pekugara kunze kwenzvimbo yekuchengetedza vanhu. Zvakare uye zvakare vanhu vanoendeswa kunze kwemusuwo kana tembiricha iri pazasi zero uye vobva vaoma chando kufa zvinorwadza. Uye iro dambudziko rekushaya pekugara kuGerman pachayo harisi kutariswa nenzira yakasarudzika. Apa ndipo panotangira chirongwa chedu chekudzokerazve kune vasina pekugara. Kutanga necold emergency emergency capsules kuchengetedza vasina pekugara kubva kurufu runodzivirirwa nyore nyore, tiri kuvaka system inorwisa matambudziko akakosha ekushaya pekugara, kushomeka kwekuchengeteka, pasina mikana yemabasa uye kupatsanurwa munharaunda, uye nekudaro zvinobatsira vanhu kuti vadzokere kuhupenyu hwakajairwa zvishoma nezvishoma inoita.
Kana iwe ukambove nedambudziko uye usingazive zvekuita zvinotevera, saka tsvaga iyo PixelHELPER November 15th, 2021Oliver Bienkowski
kuderedza zvombo Android App Bahrain 13 Federal Chancellery Federal intelligence basa Ruvara rwehungwaru rwebasa mugwenzi moto China boka revanhu mari Erdogan moto kurwadziswa freeRaif kusununguka kutaura kwemaonero hercules rubatsiro rwekubatsira kambeyini mishandirapamwe Catalonia landmines Rudo haruna ruzivo Livestream Live hova Livestream swarm rubatsiro Loreley Morocco zvangu NSA mumba Oberwesel vasungwa vezvematongerwe enyika Rainbow for Orlando chombo Saudi Arabia remhashu Help spanish spring Spirulina Uighurs Uyghur kuchengetedza rusununguko United Stasi yekuAmerica upcycling zvokutengeserana zvombo Hongu tinopenya! zvichiongororwa